China LSR Mask nkpuchi na ngwaahịa | Chapman
✭N'ihi nnukwu ọchịchọ maka akụkụ silicone a mmiri, anyị emeela 6 ụdị nke LSR ebu maka ndị ahịa anyị na mkpokọta. Ọnụ ọgụgụ nke cavities na ebu ọ bụla bụ oghere 4, a na-eji ihe arụ siri ike S136 mee ihe ihu na azụ ndebiri, na ike bụ HRC48-52 degrees.
✭N'ihi ihe nlere siri ike nke ngwaahịa a chọrọ, a ghaghị ịchịkwa akara nke ngwaahịa ahụ n'ime 0.03mm. Anyị ebu nhazi ziri ezi ga-achịkwa n'ime nso nke 0.005-0.01mm. na oge ufodu ịhapụ ya, ọ na-esiri anyị ike ịmepụta ihe. Anyị ga-ahụrịrị na akụrụngwa nhazi anyị na teknụzụ nwere ike izute ihe ndị ahịa chọrọ. Site 35 ụbọchị nke nhazi na n'ichepụta, anyị ebu ule bụ nnọọ ihe ịga nke ọma, na ahịa anyị ozugbo etinye n'ime uka mmepụta.
✭Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa ndị yiri ya, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Anyị ga-abụ ezigbo onye ọlụlụ gị.
Akpụzi mba. CPM-20-S1066
Elu imecha Usoro VDI-12
Ihe Plastic Silicọn
Akụkụ akụkụ 50.7g
Kere Software UG
Nkebi nke 128.00 X 120.00 X 65.00mm
Ngwa Industrylọ ọrụ ọgwụ
Ebu ebu 400 X 450 X 417mm
Aha Aha LSR nkpuchi
Akpụzi Ogwe 1 * 4
Ndị na-agba ọsọ Oyi agba oso maka sub gate
Ebu ebu S136 / P20
Ebu Ndụ okirikiri 1,000,000
Etiti oge 35ụbọchị
Ebu Cycle Oge: 120's
Kwụ ụgwọ Uhie
Ejiri ya na ikuku na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku na-ekpuchi ya, a na-emepụta ihe mkpuchi ahụ ma mepụta ya maka ndị ọrụ na-aga n'ihu na gburugburu nsogbu. Ugbu a, enyerela onye ọ bụla aka.
Ihe nkpuchi a bụkwa ụdị mbụ nke ụdị ya * n'ihi na ọ na-eme ka nchedo dị elu n'ihi ekele ya na usoro nhazi ya. N'ihi na e sitere na ihe ndị nwere ike imetụta akpụkpọ anụ ahụ, ihe nkpuchi ahụ nwere ike isi ike, na-ejigharị ya kwa ụbọchị ma nwee ike ịdịru afọ abụọ.
Coronavirus na-agbasa site na ụmụ irighiri iku ume mgbe onye bu ọrịa ahụ na-akwa ụkwara ma ọ bụ mgbe ọ zụrụ, ma ọ bụ site na ihu ihu rụrụ arụ wee metụ anya gị, imi ma ọ bụ ọnụ gị aka.
Ezubere ya na 3D ihu data iji kwado ụdị ọdịdị ihu dị iche iche, silicone ahụ dị nro kwekọrọ na ọdịdị ihu nke ndị na-ebu ya, na-eme ka ọ dị mma iji eyi maka ogologo oge na-enweghị mgbanwe, ọnya ma ọ bụ mgbakasị.
Mepụta uru maka ndị ahịa ma mee ka ọ zuo oke bụ nkà ihe ọmụma anyị. Ga-amata uru ka ukwuu site na isoro CPM rụọ ọrụ!
Anyị na-enweta na ụdị nile nke steels na oyiyi akwa nke mba ọkọlọtọ
Nkwakọ ngwaahịa & nkwakọba
Nke gara aga: Obere nkenke servo sterịn gia mkpuchi
Osote: Control Unit na n'Aka njikọ ala mkpuchi
Ihe nzacha mmanụ
Control Unit na n'Aka njikọ ala mkpuchi